ရှင်ဗွေယန်မြို့နယ်တွင် အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ ကေအိုင်အေကြား တိုက်ပွဲဖြစ်ပွား - Kachinland News
စမ်းသပ်ကာလအနေဖြင့် ကွန်တိန်နာ ကရိန်းများနှင့် နယ်စပ်ဂိတ်များကို ပြန်လည်စတင် November 27, 2021
ကိုဗစ်ကူးစက်မှုများပြားခဲ့တဲ့ အင်ဂွမ်လတွင် စာသင်ကျောင်းပြန်ဖွင့်လှစ်နိုင်ပြီ November 26, 2021
အင်းတော်ကြီးဒေသတွင် စစ်ကောင်စီက စစ်လေယာဉ် ၂ စီးဖြင့် ဗုံးကြဲတိုက်ခိုက် November 26, 2021
စစ်ကောင်စီတပ်မှ ဒေသခံပြည်သူတစ်ဦးကို ဖမ်းဆီးကာ သတ်ဖြတ်ပြီး အလောင်းဖျောက်သွားခဲ့ November 23, 2021
မူဆယ်တွင် စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်တို့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီး စစ်ကောင်စီတပ်က ပြည်သူ ၁၀ ဦးကို ဖမ်းဆီးထား November 22, 2021
ရှင်ဗွေယန်မြို့နယ်တွင် အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ ကေအိုင်အေကြား တိုက်ပွဲဖြစ်ပွား
သတင်း October 25, 2021 KLNB
တနိုင်း-လီဒိုလမ်းပိုင်း ရှင်ဗွေယန်မြို့နယ်ခွဲ တခတ်ကျေးရွာအနီးတွင် အောက်တိုဘာ ၂၅ ရက်နေ့ နေ့လည် ၁၁ နာရီခန့်တွင် ထိုဒေသတဝိုက် စစ်ကြောင်းထိုး လှုပ်ရှားလာတဲ့ အာဏာသိမ်း အကြမ်းဖက် စစ်ကောင်စီတပ် ခမရ (၈၆) တပ်ဖွဲ့နဲ့ ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် တပ်မဟာ (၂) တပ်ရင်း (၄၅) တို့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။
အင်အား ၆၀ ပါဝင်တဲ့ စစ်ကောင်စီယာဉ်တန်းက ရှင်ဗွေယန်ဘက်ကနေ တရုံကျေးရွာဘက် စစ်ရေးလှုပ်ရှားလာစဉ် ကေအိုင်အေတပ်မှ ကြားဖြတ်မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ပြီး နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ကာ စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များက အနီးဝန်းကျင်ဘက် လက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်များဖြင့် ရမ်းသမ်းပစ်ခတ်နေခဲ့ကြောင်း ရှေ့တန်းသတင်းရင်းမြစ်အရ သိရပါတယ်။
အဆိုပါစစ်ကြောင်းက စစ်ရေးလှုပ်ရှားလာခြင်းကြောင့် အောက်တိုဘာ ၂၂ ရက်နေ့တွင်လည်း တနိုင်းမြို့မှ စစ်ယာဉ်တန်းဖြင့် တက်လာတဲ့ စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကို ကေအိုင်အေဘက်မှ လဂျားဘွမ်နဲ့ တရုံကျေးရွာကြားတွင် တိုက်ခိုက်မှု ရှိခဲ့ပါသေးတယ်။
တနိုင်း-လီဒိုလမ်းတဝိုက် စက်တင်ဘာ လဆန်းပိုင်းကစတင်ပြီး အာဏာသိမ်း စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ KIA တပ်ကြား တိုက်ပွဲတွေ မကြာခဏဆိုသလို ဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပြီး အနီးဝန်းကျင်ရှိ ကျေးရွာပြည်သူများကို တောတွင်းသွားလာခြင်း မပြုလုပ်ကြဖို့ ကေအိုင်အေဘက်မှ သတိပေးထားကြောင်းလည်း သိရပါတယ်။
အင်ဂွန်လ အထက်တန်းကျောင်းမှ ကျောင်းသားများနဲ့ ဆရာများ ၂၂၀ ဦးတွင် ကိုဗစ်ပိုးကူးစက်ခံရ
စစ်အာဏာရှင်စနစ်နဲ့ လူမျိုးကြီးဝါဒကို အမြစ်ပြတ်ချေမှုန်းသွားမယ့် KIO ဥက္ကဌမိန့်ခွန်းကို Alen Bum စစ်ဘေးရှောင်ကျောင်းသားများ အတူတကွနားဆင်ခဲ့
၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲ – ဒီတစ်ခါလည်း အနိုင်ရသူ အကုန်ယူကြေးပဲလား
TNLA/PSLF အား ထာဝရမဟာမိတ် အဖြစ် ဆက်လက်သပ်မှတ်သင့်ပါသလား?
ဗမာ/မြန်မာနိုင်ငံ၏ တိုင်းရင်းသားပြည်နယ်များ၌ဖြစ်ပွားနေသော ပြည်တွင်းစစ်၏ ရေသောက်မြစ်
Home ရှင်ဗွေယန်မြို့နယ်တွင် အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ ကေအိုင်အေကြား တိုက်ပွဲဖြစ်ပွား
Copyright © 2021 by Kachinland News.	Theme: DW Focus by DesignWall.